Baolina kitra - Afrika :: Hitady fotoana hafa hanaovana fivoriambe ny CAF • AoRaha
Baolina kitra – Afrika Hitady fotoana hafa hanaovana fivoriambe ny CAF
“Ny fahasalamana no zava-dehibe”, hoy i Ahmad, filohan’ny Kaonfederasiona afrikanan’ny baolina kitra (Caf), ny sabotsy lasa teo, tamin’ny lahateny noentiny nanamafisana ny fampi-atoana mandritra ny fotoana tsy voafetra an’ireo fifaninanana rehetra karakarain’izy ireo. Isan’ny voakasik’izany ny fivoriambe fanao isan-taona andiany faha-42, tokony hatao any Yaoundé (Cameroun) amin’ny 24 avrily 2020 ho avy izao. “Hahemotra amin’ny fotoana manaraka io fivoriambe io”, araka ny nambarany.
Noho ny fihanaky ny otrik’aretina Covid-19 dia nanamafy ny fanapahan-kevitra efa noraisiny tamin’ ny 13 marsa lasa teo ity rafitra iraisam-pirenena afrikana miahy ny baolina kitra ity. Isan’ireo nohamafisin’ny filohan’ny Caf ny fampiatoana ny dingan’ny fifanintsanana hiadiana ny tapakila hiatrehana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN 2021) hatao any Cameroun. Toy izany ihany koa ny fampihemorana ny datin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ho an’ny ekipam-pirenena tsy misy mpila ravinahitra na ny Chan 2020, tokony hatao amin’ny 4 – 25 avrily ho avy izao any Cameroun hatrany.
“Adidin’ny Caf ny mandray andraikitra tandrify azy amin’ny ady atao tsy hiparitahan’ny valanaretina aty amin’ny kaontinanta Afrikana”, hoy hatrany i Ahmad. Nomen’ity filohan’ ny Caf ity hiasa any an-tranony, nanomboka tamin’ ny 19 marsa hatramin’ny faran’ny volana, ireo mpiasa eo anivon’ny foiben’ny kaonfederasiona afrikana. “Mila miray hina isika amin’izao fotoan-tsarotra izao hahafahana miady amin’ity areti-mandoza ity sy hahazoantsika tontolo milamina sy miverina amin’ny laoniny”, hoy hatrany izy.
Fandrobana sy famonoana :: Lehilahy avy nandoro olona, nodoran’ny fokonolona velona
Fifaninanan-kira any Frantsa :: Hiakatra ny zana-tohatra manaraka amin’ny “The Voice” i Ludysoa sy Nathan